Imaski yoBuso obususekayo, iimaski ezingama-N95, iiVali ezilahliweyo, izambatho zePPE-Tianli
IQuanzhou Tianli yoKhuseleko lweMveliso yeMveliso Co, Ltd (SSP) eyasekwa ngonyaka ka-2010, ikwisiXeko saseQuanzhou, iFengze ityebile ngoboya bezinwele.Quanzhou Tianli Protective Product Production Co, Ltd. I-2010, ikwisiXeko saseQuanzhou, iFengze esisityebi kakhulu ngoonwele. Inkampani yethu ibalulekile ekwenzeni iimveliso ezikhuselayo zokuphefumla.
I-150 mm isixhobo sePads zoPhuculo lwezixhobo
I-4 intshi kwikhonkrithi yedayimani yokuphola edongeni
Isixhobo seplastikhi seplastiki yePDR emanzi
PM2.5 ileta egunyazisiweyo
Ezona mveliso ziintlobo ngeentlobo zemaski ye-PPE kunye neemaski ezichasene ne-Pm2.5, ezinje ngemaski ebunjiweyo eyomeleleyo yeefestile zemaski, iimaski ezisongiweyo eziphezulu zokufotokopa kunye nezinye izinto ezininzi kunye neentlobo ezahlukeneyo.
Imaski ye-Anti Pm2.5
ikomityi emile okwemitya ebushushwini ephezulu
Siza kuqinisekisa ukuba uhlala uyisebenzisa
Esona siqinisekiso sinamandla
Ubungcali kunye nesimo sengqondo
Inkampani yasekwa ngo-2008.
Nguwe kuphela umthengisi woluhlobo olutsha lwe-PM2.5 yokuphefumla e-China.
Isixhobo seplastikhi seplastikhi yePDR emanzi yokuntywila kumgangatho wentengiso
Intoni bathethe abantu
IQuanzhou Tianli Production Product Production Co, Ltd (SSP) eyasekwa ngonyaka ka-2010, ikwisiXeko saseQuanzhou, iFengze ityebile ngoboya obunwele. Inkampani yethu ibalulekile ekwenzeni iimveliso ezikhuselayo zokuphefumla.
Imaski yethu ekhuselayo ekhethekileyo kwi-brand ye-MASKin iyaziwa ngabathengi kwaye ifumana udumo oluhle nayo, ukwakha umfanekiso okumgangatho ophezulu engqondweni yemibutho yobungcali kunye nabathengi. I-SSP ihlala ihambelana nefilosofi yenkampani yokuqhubeka nokuphucula, yenza ixabiso.
Kususela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu ubuphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala ngokubambelela kwimigangatho yomgangatho wokuqala. Iimveliso zethu zifumene udumo oluhle kushishino kunye nokubaluleka kokuthengisa phakathi kwabathengi abatsha nabadala ..
ngu adminMar-31 ukuya ku-2020